Down Jacket ကိုနေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း
21-03-25 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၁၊ ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း အကယ်၍ ညွှန်ပြထားပါကအောက်ပါဂျာကင်အင်္ကျီကိုခြောက်သွေ့အောင်ဆေးကြောနိုင်သည်။ အရည်အသွေးနိမ့်သည့်နေရာတွင်အညစ်အကြေးများခြောက်သွေ့အောင်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ သို့သော်အရည်အချင်းမရှိသောသို့မဟုတ်အဆင့်နိမ့်သောခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျီကျည်ကိုပျက်စီးစေရန် ...
Type A Type A အဝတ်အထည်ပရိုဖိုင်းကိုခါး၊ သို့မဟုတ်ခါးလိုင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သောအနံမရှိသောကုတ်အင်္ကျီနှင့်ကုတ်အင်္ကျီဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပါးလွှာသောအထက်ပိုင်းသို့မဟုတ်ခါးကိုမီးမောင်းထိုးပြရုံသာမကဘဲဝမ်းဗိုက်ကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပြီးပါးလွှာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။ အကြမ်းဖျင်းအကြမ်းဖျင်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအားသာချက်များ - ၁။ ရွေးချယ်စရာဈေးနှုန်း - ၀ ယ်ယူသူများသည်အမြတ်အစွန်းကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်စားသုံးသူအုပ်စုများနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာဈေးနှုန်းဖြင့်စတိုင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ 2. အထည်အလိပ် optional ကို: ထုံးစံက c အသုံးပြုသောထည်လွတ်လပ်စွာနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေးချယ်နိုင်သည် ...